Ubukho ... -Geofumadas
Agasti, 2010 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, yokuzonwabisa
Intombazana yenze ipirouette, yajika yaya kuye, yasondela, yaqubuda, yambona ekwiisentimitha ezingama-34. Emva koko wayesazi ukuba yayinguye, amehlo afanayo ...
Yayibubusuku obuqhelekileyo, ukusebenza nzima eofisini. Ngezo ntsuku xa umculo ka-U2 ojikelezayo ukhala kwikhibhodi ye-Chamaco, ebandakanya izithethi ezine-Suround, phaya ngasemva, uRaúl onee-headphone washukumisela intloko yakhe kwisingqisho sika-Arjona kunye neentshatsheli zakhe zesiqhelo; Ngelixa u-Jorge's meringue anyibilika phakathi kweetyhubhu, ngaphaya, nganye nganye yatshona de kwaba li-9 ebusuku izama ukwenza oko amehlo akhe adiniweyo enokukutolika.
Kodwa loo mini yayiyimfuneko, iqela lesizwe lidlala elinye umdlalo -okanye ngaphantsi, a ngazangebe-, ke uninzi lwababoneleli baqinisekisa umphathi ukuba atshintshe iveki, ayeke ngebha yasebusuku ukuze abone ukuphumelela, apho kwindawo ekhethiweyo yegringas yasePalmerola. Kwakungaqhelekanga ukuba ahambe nathi, njengomphathi wayehlala ecaleni, kodwa njengomhlobo wayezithemba kakhulu, ade agxuphuleke kwimicimbi ebekungafanelekanga ukuba abe nayo.
Saqala, sihamba amahlaya, sigazi, sinobukhohlakali, kodwa sinomdla wokuziva ukuba akuyi kuba ngabakho vectors ngaloo mini -nobusuku-. URaúl wazixelela kwangesiqendu sinye, xa iimephu zaphoswa emgqomeni, uJuan oneemephu ezimanzi kwiindibano zovakaliso-zimvo ngomhla wokugonywa kwenja, ikwanguye lo wayendazi, owayendenza nzima ukuba ndihleke ngenxa yokuhlekisa. yamashumi amahlanu.
Sifikile kwindibaniselwano, evela ngaphandle ibukeka ngathi yindlu, emva kokudlula emnyango umoya uguqukile. Inkwenkwe eyayinamava kwezohambo, yavumelana ne gorilla Ukusuka ekungeneni, wasidlulisa ngepaseji eya kwiholo enezibane ezijikelezayo, abantu behleli ezihlalweni zabathathu, iqonga elingunxantathu elinetyhubhu ethe nkqo embindini kunye ethe tyaba ekupheleni, ngeestendi. Sihlawule inkampani ye-wort kwibhakethi elibandayo, ebandakanya iithokheni zeplastiki zeepirouettes ezikhethekileyo.
Iqela, liyadika. Phantse kwisiqingatha sesibini, bakhokele ekukhetheni i-4 ukuya kwi-1, kwaye benemiqondiso embalwa yokusinda. Ukusuka kwinqanaba eligqithisileyo, i-animator yabhengeza ukuba lixesha lokuwunonga umdlalo. Ngokukhawuleza abantu bafumba ebharini, baqala ukuqhwaba izandla ngesingqi esingenanto yakwenza nengoma kaBonJovi eyayiza ngasemva. Kwaye, nganye nganye, kwahamba amantombazana amathathu, nganye nganye, inenkqubo efanayo. Iiplatifomu ezi-4 intshi, amadlavu avuselelayo. Ingoma echukumisayo, emva koko izibane zacuthwa kwaye ingoma yothando yakhokelela intombazana kwisingqi sokuqhwaba izandla, ngakumbi, iimpahla ezincinci, ngelixa abanye abantu abatyhafileyo bachitha ithokheni yabo yokuqala.
Kodwa xa intombazana yesine yafika, umfanekiso watshintsha. Umlingane endandihlala naye wafikelwa luvalo, kuba le ntombazana yeza, yathatha ilamuni yaza yayifaka emlonyeni wayo ngamandla, emva koko yahlala kwisitulo sokuhlala kwaye kubonakala ngathi ezinye iigiya zijikile ngaphakathi kweetempile zayo. Umlomo uvulekile njengoko uPac-man ewuthile, wajonga ifilly ejikeleza ibha, emosula nge-napkin amnike yona umntwana kwelinye i-vertex, kwaye ngoko ingoma yeCarlos Vives isichithwe, ngesitayela esingenakuqondakala.
Ndabona iinkophe zam umhlobo wam zisihla phakathi, njengoGarfield, emva koko wajija, iglasi njengamarble amanzi. Izibane zacima, kwaye ingoma engapheliyo ka-Def Leppard yaqala: Uthando lubetha.
Xa wenza uthando, uyabukeka kwisibuko?
Ucinga ntoni na, ingabe ujonge ngathi?
Kodwa imvakalelo yakhe yayingeyoye incasa kwangoko, kuba ngewayebeke umqondiso emazinyweni kwakamsinya nje ukuba umjikelo uqalile, endaweni yoko kubonakala ngathi kuza kudlula ixesha, apho emazantsi-ntshona tangent washukumisa ingxowa yakhe wasabela kwiintshukumo ezincinci ijonge emazantsi amantla angaphezulu. Iinkumbulo zakhe kufuneka ukuba zibuyela umva kuloo nyaka wokuqala wekholeji, xa ubhaka kunye neencwadana zazinazo zonke izinto awayezinyamekela ukuze aphile.
Ngaba uthetha ubuxoki uze uthi unaphakade
Kwaye emva koko, ndandinoluvo lokuba wayebona ngamehlo, ubuso obuqhelekileyo, mhlawumbi bezisa kuye inkumbulo yothando lwangaphambili, phambi kobambiso lobo bomi. Wayengakhathali nokwazi ukuba unciphisa iimpahla zakhe, yayingamehlo akhe kunye noncumo olufihliweyo awamzisela lona-kwaye wayegqoke-kuye kwimboniselo ekude, kwindawo yentliziyo engasemva kwesakhiwo seNjineli yezoMveliso, ukuya kuthi ga kumda weqela le-GLONASS kodwa ngokusondele njengokuthimba isigaba sayo sothwali.
Ngaba ucinga kabini okanye nje uthinte 'n' ubone
Amehlo akhe aqengqeleka ekwikhefu elibukhali, kodwa hayi kumda weemitha ezili-10 ze-equilateral, wayekude kakhulu. Emva koko waziva ngathi kukho umaleko ophuma kwi-epidermis yakhe, enye, enye, kwakhona, kumaqhuma erhasi. Njengoko intombazana ibonisa izipho zayo eziphuphayo, ukubetha kwakuvakala kwaye yaxhonywa epalini ngokubila. Iyamangalisa!
Andifuni ukukuchaphazela kakhulu umntwana
Uthando lukaKos makinakho luya kundiqhuba
Intombazana ivale i-earwig, igubungela ubomi bayo ngesandla esinye, yajika yaya kuye, yasondela, yaqubuda, yambona ekwiisentimitha ezingama-34. Ndingafunga ukuba emva koko wayesazi ukuba yayinguye, ngamehlo afanayo, intombazana leyo yayingathi iyangqubana nayo, yarhoxa yabuyela kumdlalo wayo. Emveni koko wamleqa ngamehlo wade wadinwa, waphepha nje kangangoko anako kodwa umgama awenzanga nto ngaphandle kokuququzelela umbono wakhe we-photogrammetric kwaye ekugqibeleni umhlathi wakhe wawa ngathi yidrowa.
Andicingi ukuba uthando luyindlela oyenza ngayo
Emva kokukrwaqula okumbalwa, okwakubonakala ngathi kuyanyibilika emoyeni, akakwazanga ukuyigqiba ingoma, wenza isenzo sokwanelisa abaphulaphuli bakhe, wajika wasondela kwizitendi. Uluntu lwamkhwaza ukuba aligqibe, kodwa wayesele encedwa ngu ingqokelela, owamnika iimpahla zakhe zangaphezulu, ekuphela kwento awayenokuyisusa, wamkhokelela kwelinye icala lebha. I-animator yafihla yonke into, yenza umnxeba wokuqala kuwo onke amantombazana kwaye yacela ihlombe kuPamela omkhulu.
Ngoko andifuni ukuba khona xa ugqiba ukuliphula
Uthando lukuluma uthando lopha-iyandisondeza ezintseni zam
Uthando luphila uthando lufa- ayothusi
Uthando luyakuthanda ukuthandazela - yinto endiyidingayo
Yadlula intombazana leyo, yajonga emehlweni ayo, yathatha isandla sayo, yamphuza esidleleni, yahlebeza into phakathi kwamazinyo ayo. Emva koko wemka. Ndabona emehlweni akhe mahle ezintathu zesihlanu zinyembezi, ndandixakiwe, ndimangalisiwe kwaye ndingazi kakuhle ukuba ndicinga ntoni. Ngokuqinisekileyo akukho mntu waziyo ukuba mandithini kumhlobo, othe ngequbuliso kuhambo ebusuku wazifumana ekumgama oziisentimitha ezingama-34 ukusuka emehlweni ekubonakala ngathi wazi imigama emifutshane kakhulu.
Kwiminyaka kamva wavuma kum ukuba uqinisekile ukuba uza kuthatha le ntombazana ngobo busuku. Khange andixelele ngezinye iinkcukacha ndide ndiyifunde kwimeko yakhe kuFacebook, engatshintshanga ixesha elide.
Ngobo busuku, wawukhona. Yayingamehlo akho, imilebe yakho, wawulapho. Yayikukuncuma kwakho, umvambo wakho, ukubila kwakho, ubukhona.
Ngentsasa ndibone kwakhona amehlo akho, emhle, uncumo lwakho, umhle, kodwa ibingengowakho. Ubungekho.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iingcebiso: Indlela yokuqala ukubhalwa kwinqaku
Post Next I-CD Solo yobunjineli yePremiyamu ka-2010Okulandelayo »
4 Ukuphendula "Ubulapho ..."
Intombazana ngaloo busuku ibizwa ngokuthi uRoberto hahahaha
Indoda ibiphumile ... inelungelo ...
Hehe, ubungendawo kangakanani.
Ndixakekile kangangokuba andinakukwazi ukubhala izihloko ezilula.
Ngaba ikubambile ingxaki yama-40? ...